तपाईंलाइ डन्डिफोर आएको छ ? यसकारण तत्काल उपचार नगराउनुस् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाईंलाइ डन्डिफोर आएको छ ? यसकारण तत्काल उपचार नगराउनुस्
तपाईंलाइ डन्डिफोर आएको छ ? यसकारण तत्काल उपचार नगराउनुस्
जेठ १२ गते, २०७६ - ११:४८
सुरुसुरुमा डन्डिफोर आउदा उपचार गरिहाल्नु हुँदैन । तर, हेलचेक्र्याइँका कारण अन्य ठाउँमा संक्रमण हुने भएकाले सावधान हुन जरुरी छ । कतिपय डन्डिफोर आफैँ निको भएर जान्छ । त्यसैले डन्डिफोर कहिल्यै पनि निचोर्नु र फुटाउनु हुँदैन ।फुटाउँदा डन्डिफोरको पानी सर्न गई अर्को ठाउँमा पनि आउने सम्भावना हुन्छ । यो जानकारी नयाँ पत्रिकाबाट लिएकाे हाे ।
जेठ १२ गते, २०७६ - ११:४८ मा प्रकाशित